▷ Zuva rePrime paMatafura: ZUVA zvakanakisa zvibvumirano ▷ ZVAKAITWA
Amazon inodzokera kumakwikwi nevhiki rese rezvipo pamapiritsi uye graphic mahwendefa atinoda kugovana newe kuitira kuti pasave neizvi zvekutengesa zvinopukunyuka kwauri.
Kunyangwe isu tisingazive iro chairo zuva rePrime Day, isu tinoziva kuti tichaona zuva nezuva kutengesa kutsva, saka tiponese mune zvaunofarira kuti iwe ugone kuona zvidzikiso zuva rega rega. Heino kusarudzwa kweakanakisa Prime Day 2021 zvibvumirano pamapiritsi:
Hwendefa 10 Inch 8 Core ...
Hwendefa qunyiCO Y7 Android ...
Prime Day yapera. Dzoka pano muna 2022 kuti uwane akanakisa piritsi rekudzikisira kunhengo dzeAmazon Prime
1 Zvibvumirano zvakanakisa pamahwendefa eHuawei ePrime Day
2 Zvakanakisa zvibvumirano pamahwendefa eSamsung ePrime Day
3 Yakanakisa iPad Zvibvumirano zvePrime Day
4 Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eChuwi ePrime Day
5 Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eTeclast ePrime Day
6 Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eSurface ePrime Day
7 Zvakanakisa zvibvumirano paAmazon Fire mahwendefa ePrime Day
8 Chii chinonzi Prime Day
9 Prime Day 2021 inopembererwa riini?
10 Yakareba sei Amazon Prime Day?
11 Inguva yakanaka yekutenga piritsi paPrime Day?
Zvibvumirano zvakanakisa pamahwendefa eHuawei ePrime Day
Huawei yave imwe yeanofarira piritsi brand kune vakawanda. Pamusoro peiyo Hardware, iyo inonakidza yekubatanidza, uye mhando yemagadzirirwo ayo uye kupera, inomirawo pachena nekuve nemitengo yemakwikwi. Kunyanya kana iwe ukatora mukana weAmazon Prime Day kuti uwane imwe yeiyi, sezvo kuchave nekuderedzwa kunogona kubva pamaeuro mashoma kusvika makumi maviri muzana kana kupfuura.
Kana iwe uchitsvaga piritsi risingazokuodza mwoyo, nekuita kukuru, yakagadziridzwa sisitimu yekushandisa, uye ine bargain kukoshesa premium ruzivo, senge system yako yekurira, skrini yako yekugadzirisa, kana kunaka kwekamera yako, nezvimwe.
Zvakanakisa zvibvumirano pamahwendefa eSamsung ePrime Day
Prime Day iri kusvika, uye vese vashandisi vane kunyorera kune iyi Amazon sevhisi vachakwanisa wana Samsung piritsi ine yakanaka muzana discounts. Mukana wakakura wekutenga imwe yemhando kubva kune iyi South Korea femu inomira seimwe yeakanakisa dzimwe nzira dzeApple iPad.
Samsung inomirira tekinoroji yepamusoro, Hardware ine simba, shanduro dzakagadziridzwa firmware uye Android, yakanaka tekinoroji sevhisi uye akawanda anowirirana zvishongedzo zvekuenderana nazvo izvi zvishandiso, sekunze kiyibhodhi, iyo S-Pen yedhijitari peni, maspika asina waya uye zvimwe zvakawanda.
Yakanakisa iPad Zvibvumirano zvePrime Day
2021 Apple iPad (kubva ...
Apple ine imwe yemapiritsi akanakisa pamusika, nekuvimbika kunoshamisa, kuita kunoshamisa, yakagadziridzwa software, ichangoburwa tekinoroji, yakanyanyisa kunaka maererano nekamera yayo, ruzha, skrini uye kupedzisa zvinhu, pamwe neimwe yezvakanakisa kuzvitonga kwauchawana. Nekudaro, iyo iPad ndeimwe yemidziyo inodhura zvakanyanya.
Ndokusaka iwe uchifanira kutora mukana weAmazon Prime Day, sezvo uri kuenda kukwanisa kuwana zvinopihwa pamidziyo iyi nemadhisikiro muzana anozovashandura kuita imwe yemikana yakanakisa yegore kuti uwane mumwe wavo.
Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eChuwi ePrime Day
CHUWI iPad X Tablet 10.1 ...
Iyo Chinese brand Chuwi yakakwanisa kuzvimisa se imwe inotengeswa zvakanyanya nekuda kwemutengo wayo wakaderera, dhizaini yekungwarira (inotaridzika seApple clones), uye mhando yekupedzisa kwayo, pamwe nezvimwe zvinoshamisa zvemhando yehwendefa. Pamusoro pezvo, iwe unogona zvakare kuvimba kune mamwe mamodheru anoenda kure neArM-Android binomial uye kubheja pa x86-Windows 10.
NePrime Day unogona kuwana zvikwata izvi kunyange zvakachipa, kunyangwe iwo anouya neayo ese ekuwedzera pack inosanganisirwa (yekunze keyboard, stand, uye peni yedhijitari).
Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eTeclast ePrime Day
TECLAST M40 Pro Tablet ...
Teclast ndeimwe yemafemu eChinese ari kuwana zvirinani kutengesa muzvitoro zvakaita seAmazon. Uye havangomiriri chete mutengo wayo wakaderera, ivo vakawanawo mukurumbira nekuda kwemhando yavo yakanaka, kuita uye dhizaini yakasimba.
PaPrime Day iwe uchave nemukana unoshamisa wekutora yakachipa yeTeclast piritsi. Saka iwe uchave wakashongedzerwa nemudziyo une IPS pani, ine simba 8-core processor, yakagadziridzwa Android system yekushandisa uye, kupfuura zvese, Kubatana kweLTE (chimwe chinhu chausingazowani mune vamwe nemitengo yakaderera kudaro).
Zvibvumirano zvakanakisa pamapiritsi eSurface ePrime Day
Microsoft yakadawo kukwikwidzana neApple neSamsung, ichiva chiyereso chemapiritsi ane simba zvakanyanya ane mabasa uye maficha anoita kuti ave akanakirawo. nharaunda dzebhizinesi. Ivo vanomira kunze nekuve nepamusoro-inoshanda Hardware kunyangwe yemitambo, hupenyu hwakanaka hwebhatiri, uye kuvimbika kukuru.
Zvese zvakarungwa ne Windows 10 inoshanda sisitimu, izvo zvinoreva kukwanisa kuisa software yese inoenderana neiyi system, pamwe nekuwana iyo hombe yemavhidhiyo mutambo katalogi. Zviripachena, mahwendefa aya anowanzo kuve nemutengo wepamusoro, achipihwa zvese zvavanopa, asi iyo Prime Day discounts zvinoreva kuti haufanirwe kusiya iyi jewel yetekinoroji.
Zvakanakisa zvibvumirano paAmazon Fire mahwendefa ePrime Day
Ehe, Amazon zvakare ine yayo mahwendefa akachipa mutsetse. Iyo Moto HD ndeimwe yemhando dzinotengeswa zvakanyanya pamutengo wavo wakaderera, kubatanidzwa kwavo kwakakwana nemasevhisi epuratifomu iyi (Alexa, Prime Vhidhiyo, Mimhanzi, Mapikicha, Kindle,…), yakagadziridzwa FireOS inoshanda sisitimu, uye zvine mutsindo maficha.
Uye kana vatove nemitengo inoyevedza, paPrime Day vanokanda imba kunze nepahwindo zvakaderedzwa zvakanyanya pane zvese zvigadzirwa zvetekinoroji, zvichikubvumidza kuti utenge imwe yemapiritsi aya ane zvidzikiso zvinogona kusvika kusvika 45%.
Rangarira kuti zvakawanda zvezvipo izvi zvinongoshanda kwenguva shoma saka kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvinoonekwa pane ino peji, zvitenge nekukurumidza sezvinobvira kuti uve nechokwadi chemutengo wakadzikiswa.
Iwe unoda kuona zvese zvaderedzwa paAmazon Prime Day?.
Chii chinonzi Prime Day
Prime Day chiitiko chekutengesa umo Amazon, chimwe chezvakakosha zvitoro zvepamhepo mune network, inotipa zviuru zvezvigadzirwa nemutengo wakaderedzwa. Zvipo zviripo chete kune Prime vashandisi, izvo zvaimbozivikanwa se "Premium". Pakati pezvinhu zvine mutengo wakatemwa tinogona kuwana chero chinhu, senge zvigadzirwa zvemagetsi, zvipfeko kana zvine chekuita nemitambo uye hutano. Izvo zvinopihwa ndeye "flash" mhando, zvinoreva kuti ichave iripo kwenguva shoma, saka zvakakosha kuti tirambe takatarisa pane zvitsva zvinoonekwa.
Prime Day 2021 inopembererwa riini?
Muna 2019, Prime Day yakaitika mumazuva maviri, kutanga munaChikunguru 15. Zuva rePrime ra2020 harina kukwanisa kupembererwa muzhizha nekuda kweCoronavirus, zvakaitika muna Gumiguru 13 na14.
Neraki, zvishoma nezvishoma zvese zvinodzokera kune zvakajairika uye Muna 2021, Prime Day ichapembererwa musi waChikumi 21 na22.
Yakareba sei Amazon Prime Day?
Gore rapfuura rakatora mazuva maviri, saka kana vakasaita shanduko kukusimudzira kwa2020, Prime Day inogara mazuva maviri. Saka isu tinogona kuzvisimbisa nemusi wepamutemo wePrime Day.
Ehe, zvimwe zvezvipo zvakaziviswa panguva yePrime Day zvinogona zvakare kugara kwemamwe mazuva akati wandei, saka isu tinokurudzira kuti utore rwendo uye ongorora kana zvese zvapera kana zvichiri kushanda kuti utore mukana wekuderedzwa.
Inguva yakanaka yekutenga piritsi paPrime Day?
Ehe iri. Prime Day chiitiko cheAmazon chakakosha senge, semuenzaniso, Black Friday. Iko hakuna yakanyanya kana kushomeka kuderedzwa, asi pane zviitiko umo isu tinogona kuwana piritsi nehafu yemutengo kana nekuderedzwa kwe40%. Ini handingade kufadza chero ani asi, tichifunga kuti zvinhu zvinopihwa neyakatonyanya kuderedzwa, mukana wekutsvaga piritsi ine mutengo we60-70% haugone kubviswa.
Pakati pemahwendefa atichawana pakupihwa tichava nemhando dzakakurumbira, senge iPad (Apple), Samsung, Huawei, Xiaomi kana Sony uye mamwe e "white label". Izvo hazvifanirwe kutishamisa kuti muzana wekuderedzwa zvinoenderana nemhando uye modhi yehwendefa, uye neizvi ndinoreva kuti zvakaoma kwatiri kuwana chizvarwa chekupedzisira iPad ine mutengo mukuru, asi zviri nyore kana piritsi iri. Huawei kana iyo yakataurwa chena label. Chero zvazvingaitika, kana kutora piritsi hachisi chinhu chekukurumidzira, zvakakodzera kumirira Prime Day uye uone zvavanotipa.
Tevera Mahwendefa Akachipa paFacebook uye tichakuzivisai nemadhiri akanakisa pamapiritsi. Uchazvipotsa here?
Mahwendefa akadhura » Bids » Prime Day
Black Friday pamapiritsi
Mahwendefa eCyber ​​​​Monday 2021
Mahwendefa ekupa paKisimusi